I-National Invitation Tournament (NIT)
by UCharlie Zegers
Umncintiswano weSizwe soMemo; Emva kweNkulumbuso yeNgqungquthela kwiikholeji zaseKholeji
Ngesinye isikhathi, i-NIT yayisiganeko sombhinqa kwikhalenda yebhaleji yekholeji. Ngoku, ngokufanelekileyo, kuthathwa njenge-undercard ukuya kwi-March Madness. Nanku ukukhangela kwi-National Invitation Tournament, yangaphambili, yangoku kunye nekamva.
Ngoko yintoni i-NIT, kunjalo?
I-NIT imele uMqhubi weSizwe wokuMema. Iqela leqela eli-32 lokunciphisa elinye iqela leqela leCandelo le-I Iikholeji zamadoda eklasi. Kuqhutywa rhoqo ngoMatshi.
Kukho i-NIT yangaphambi kwexesha - ebizwa ngokuba yi-"Dick's Sporting Goods NIT Season-Off" - kodwa xa abantu bethetha "I-NIT," bathetha ngenguqu yexesha leposi.
Kutheni kukho iindibano ezimbini? Akukho i-NCAA eyaneleyo?
I-NIT yaqala ... ngonyaka. Ngowe-1938, abanye ababhali bezemidlalo bahlela i-NIT yokuqala - ngaphambi kokuba, iqhawe likazwelonke kwiikhokhiti zekholeji lalichongiwe yi-poll.
Amagqabantshi ayisithupha amenywe kumqhudelwano wokuqala, ofana nomntu wonke owabanjelwa eMadison Square Garden eNew York. Inkokheli yokuqala ye-NIT yayiyithempeli, eyayihlula iColorado kwimidlalo yokugqibela 60-36.
Umqhubi wokuqala we-NCAA wabanjwa unyaka olandelayo.
Emva kweemidlalo ezimbini zokuqala, ulawulo lweNIT lwathathwa yiikholeji ezinhlanu zaseNew York: i-St. John's, iFranham, iWagner, iManhattan kunye ne-NYU. Kulungile, ngoko baqala. Kodwa kutheni uqhubeka ufumana i-NIT ?: Iintambo zokuqala ze-NCAA zincinci kwaye zithintela kwiinqununu zenkomfa.
Emuva kuma-30s nakuma-40, oko kwakunomda kunokuba kunokuba namhlanje kuba amaqela amaninzi - kuquka iinkqubo zombane zexesha elifana noDePaul noMarquette - badlala njengabazimeleyo. Ngenxa yoko, i-NIT yayivame ukuba nensimu engcono kuneCAAA.
Kwakhona, ngexesha lebhola yebhola yebhola yebhola yayingeyona into ebalulekileyo kwimidlalo yezemidlalo.
Ukudlala umdlalo eNew York, eMadison Square Garden, wawumele ithuba lokuba amaqela athathe ingqwalaselo yeendaba kwaye abuke kwi-NBA scouts engenakufumana ukudlala kwiindawo ezixhaphakileyo ze-NCAA.
Kwakungekho i-50s kunye ne-60 xa i-NCAA yongeza ibhidi ngokuzenzekelayo kwiintlanganiso zeengqungquthela kunye nakwezinye iindawo ezininzi eziziganeko ezize zifikelele ekuziphatheni.
Ngoko kwenzeka ntoni kwi-NIT? Kutheni kubakho isiganeko sesiqendu sesibini ngoku?
Umthetho osandul 'umva wabuza lo mbuzo ofanayo.
Kwinqanaba elithile, njengoko i-NCAA Tournament yaba mkhulu kwaye iquka ngokubanzi, izizathu zokuqala zokuba ne-NIT zaba zibaluleke kakhulu. Ngokukhutshwa kwe-TV, ukudlala umdlalo eMadison Square Garden kwakungeyona yodwa indlela yokuba izikolo zibonwe. Ngeentengiso ezininzi kwiinkomfa ezininzi, kwakungekho mfuneko yenye enye ye-NCAA.
Kodwa ukuba i-NIT yayigxininisa, i-NCAA yenza konke okusemandleni ukumbamba umbhobho emlonyeni wayo.
Isandi umzobo. Qhubeleka.
Ngowe-1970, uMarquette wayebekwe ngowesibhozo kwisizwe kwi-poll yokugqibela, kodwa bafakwa kwibakethi engavumelekanga kwi-NCAA Tournament. Ngoqhankqalazo, umqeqeshi u-Al McGuire waphekisa umrhumo - waza wadlala (kwaye wawina) kwi-NIT esikhundleni.
Kwiminyaka kamva, i-NCAA inqume "ukuzimisela ukuthatha inxaxheba" umthetho, owathi ukuba nayiphi na iqela elimenywe ukuba lidla ngo-Matshi kufuneka lithathe inxaxheba-okanye ungadlala kuyo nayiphi na imicimbi yonyaka.
Lo mgaqo ekugqibeleni waba yiziko lesigwebo sokungaqiniseki esikhutshwe zizikolo eziqhuba i-NIT. Ngaba lo msebenzi wawuphi na ?: Bahlalisa i-suit ngo-2005 ... izikolo ezihlanu zahlula ukuhlawula i-$ 56.6 yezigidi, kwaye i-NCAA ithatha ulawulo lwe-NIT iminyaka eyi-10.
Ngeli xesha, baye bagcina isimo se-quo, baqhuba umdlalo weqela le-32 kunye ne-NCAA Tourney enkulu. Kuhlala kubonakala ukuba kuza kudala ixesha elingakanani; Uninzi lweengcamango ezikhankanywe ngeenxa zonke ukwenzela ukwandisa intsimi yeNCAA Tournament zibandakanya ukudlulisa i-NIT.
Ngaphandle koko, ngaba kufanelekile ukuthobela ingqalelo kwi-NIT?
Hayi, iikhoopsji ezininzi zeekholeji. Akukho nto iphosakeleyo ngayo.
Ngaphandle, amanye amaqela - ingakumbi abadlali abancinci - baya kusebenzisa i-NIT egijima ekwakheni into ebalulekileyo kwiminyaka ezayo.
Ngaba Iikholeji zeGalofu Zinezi Khowudi Zokugqoka?
Iingcaphephe zeeGlophu UkuHlola kunye neNcomelo
Izibambiso zesiLwimi zesiLatin: iDipingere
I-Documentación para ser exitoso in the vala para la visa americana
Ukubambisana okulula "kweTondre" (ukuya kwi-Mow, Sheer)
1926 I-PGA Championship: Ho-Hum, nguHagen
I-Asia Nobel Peace Prize
Izixhobo kunye neZixhobo zoMqwengquthela waseSpeyin
I-Zimbabwe enkulu: i-African Age Age Capital
Ukuchonga iiHickory eziqhelekileyo-iindawo ezininzi ze-Hickory eNtshona Melika
Quote Movie Quotes